NewsOfTokha :: वेबसाइटमा गरिने विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘एड फर नेपाल’ |
वेबसाइटमा गरिने विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘एड फर नेपाल’
वेबसाइटमा गरिने विज्ञापनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आईटेक नेपालले ‘एड फर नेपाल’ प्लेटफर्म संचालनमा ल्याएको छ । आईटेकका अनुसार एड फर नेपाल पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली हो । इन्टरनेटमा, खासगरी वेबसाइटमा गरिने विज्ञापन नेपालमा पारदर्शी हुन सकेको छैन । कुनै पनि कम्पनीले दिएको विज्ञापन कति मानिस माझ पुग्यो, कुनकुन देशका मानिस माझ पुग्यो, विज्ञापन कतिले हेरे भन्ने विज्ञापनदाताले थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन उसले जनाएको छ ।
आफूले कुन पोर्टललाई दिएको विज्ञापन कुनकुन देश या भूगोलका कति मानिस माझ पुग्यो भन्ने थाहा पाउनु विज्ञापन दिने कम्पनी या व्यक्तिको अधिकार हो । यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सघाउ पुराउने काम एड फर नेपालले गर्ने आइटेकमा संचालक जीवन न्यौपानेले बताए । उनी भन्छन्, ‘एड फर नेपाल एउटा प्रविधि पनि हो र प्लेटफर्म पनि हो । यो प्रविधिमा भित्रिएर विज्ञापन दिँदा विज्ञापनदाता कम्पनीले आफ्नो वस्तु या सेवाको जानकारी लक्षित वर्गसम्म पुगिरहेको छ या छैन, कति मानिसले विज्ञापन हेरे, कति मानिसले विज्ञापनमा क्लिक गरे भन्ने थाहा पाउन सक्छन् ।! विज्ञापनका लागि जति मूल्य या शुल्क तिरिएको छ सो रकम सुहाउँदो पहुँच विज्ञापनले पाएको छ या छैन भन्ने जानकारी एड फर नेपालबाट पाउन सकिन्छ ।
एड फर नेपाल मार्फत विभिन्न वेबसाइटमा गरिने विज्ञापनमा विज्ञापन दाताले सम्पूर्ण अधिकार राख्छन् । कुनै पनि साइटमा डिस्प्ले भइरहेको आफ्नो विज्ञापनमा संशोधन गर्न, परिमार्जन गर्न तथा परिवर्तन गर्न परेमा सो काम विज्ञापन दाताले आफ्नो घर या अफिसको कम्प्युटरमा बसेर जतिबेला पनि गर्न सक्छन् । विज्ञापन दाता र विज्ञापन प्रकाशकबीच पारदर्शी सम्बन्ध स्थापित गराउने काम एड फर नेपालले गर्छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘वेबसाइट मार्फत गरिने विज्ञापनमा एड फर नेपालले ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ ।’
© 2015, ↑ .:: News of Tokha ::.